Qarriffaa Saree Lafeerratti Akeekkatu! | Fighting for Freedom and Equality
Posted: Guraandhala/February 13, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com |
Mammaaksa Oromoo “Qarriffaa Saree Lafeerratti Akeekkatu!” jedhu kan lammii Oromoo taane martuu akka dhagahaa fi mammaakaas guddanne shakkiin hin jiru. Mammaaksi kun mammaaksoota ummata Oromoo biratti beekamanii fi mammaakaman keessaa mammaaksa ijoo fi warreen akkaan jireenya hawaasummaa keessatti barbaachisoo ta’an keessatti akka ramadamuu danda’us tilmimaamuun nama hin rakkisu. Namni ennaa Sareen lafii goggogaas ta’e jiidhaa qoqortu (Cabisitu) ilaale maalif akka mammaakame hubachuu hin dadhabu. Sareen ennaa lafee qoqortu ilkaan ishii keessaa inni halaalatti muldhatu isa Qarriffaa jedhamuu dha. Kan ittiin namas tahee lubbu qabeeyyii biraa foxxoksitee nyaattuun isuma. Namni Qarriffaa saree dhedheeraa ittiin lafee cabsitu kan argee, gocha ishiis hubatemmoo waan ittiin Sarees ta’e Saroota halaalatti ofirraa dhorkuun/hari’uun Ulee lafa hin godhu. Harka duwwaa hin deemu. Saroonni yoo itti dhufte qarrifaa ishii isa lafeerreetti akeekkatee/arge/ saniin akka foxxoqisitee isa nyaattu waan beekuuf. Ulee harkaa qabaannaan garuu halaalatti Uleen rukutee ofirraa dachaasa, naannoo isaatii hari’a.
Kan Sareen ennaa Lafee qoqoratu Qarriffaa ishii argee hubachuu dadhabee harka duwwaa ykn harka raasee Ulee malee itti deemee garuu kan isa eeggatu hedduu dha. Homaa na hingootu jedhee hoomaa saroorootaatti harka duwwaa qajeellaan kan isa eeggatu ilkaan ishii isa Lafee gogoggaa fi Lubbi qabeeyyii biraarratti sileeffattee saniin ciramee hafuudha. Kun amaluma sarootaati waan taheef kan itti gaafatamu isa harka raasee sareetti qajeelee malee kan biraatii miti. Mammaaksi, afoollii fi dubiin dur-duri waa malee hin mammaakamne. Hin mammaakamus. Waa malees darbaa dabarsaan dhalootaa dhalootatti darbaa as hin geenye. Mammaaksii fi Afoolli dur-durii baruumsa kenna, ni akeekkachiisa, ni dammaqisa. Mammaaksii fi Oduun dur durii ennaa dhaggeeffatan qoosaa haa fakkaatu malee kan ceebba’amuu qabu ni ceebba’a, gama hundaanuu dhaloota gorsa. Yoo kan dhagehee irraa baratu jiraate.
Inni waa hubachuu fi qalbiachuu hin feenee fi Gorsa namaa tuffatummoo mammaaksaa fi afoola akkanaatirraayii mitii ciibsanii waga’anuu hanga irra gahee argutti hin amanu. Xummurri nama akkanaa ammoo Qarriffaa Sarootaa qofaan Osoo hin taanee Bineensa biraatiinu Kottee kaasee hanga lubbuu isaa dhabu akka gahau shakkiin hin jiru. Nama akkasii, nama osoo itti himanuu fi gorsanuu didee ammoo dhugaanuu isa gorsa. Isa gurra tokkoon dhagahee gurra tokkoon gadi naqe, isa odoo arguu fi dhagahuu Ulee isaa isa ittiin Saree fi Saroota ofirraa ittisuun gatee didee ganda keessa deeme kan isa gorsu sarootaan Kotteesaa dhabuudha. Nama akkanaa nama harka isaatin “Hoomaa Sarootaa”of buuse yoo ijaajjitti Sarootaan jajji’amees/nyaatames/ abbaatu Saroonni homaa na hingootu jedhee Ulee isaa gate waan taheef callisanii ilaaluu malee falli biraa hin jiru.
Wayyaaneen murna laafaatti, akka qoosaatti isa harka duwwaa itti dhaqeef hangoo keennituu miti. Dhaaba nagaahaa fi seera beektu akka hin taanes gochaaleen gara jabinaa ilmaan Oromoorratti waggoottan 22n darbaniif hojjette raga guddaa dha. Fuunduuraafiis hanga rukutamtee Oromiyaa keessaa hin baanetti murna yakkoota adda addaa saba Oromoorratti hojjeechuurraa duubatti hin deebitu. Murna waggootan 100n dhufuufi uummata Oromoorratti karoora baafattee hojjeechaa jirtuu dha. Silaa jarri kun kana kana hubatanii, warra isaan dura “karaa nagahaatin qabsoofna” jedhanii harka wayyaaneetti kufanii boodarra hidhaatti tortoran, ajjeefamanii fi bakka buuteen isaanii dhabamerraa barachuu qaban turan. Beekaan namarraa barata wallaalaan ammoo ofirraa barata akkuma jedhamu san jechuu dha. Kanaaf mammaaksi Abbootii keenyaa “Qarriffaa Saree Lafeerratti Akeekkatu!” jedheemiree? Hanga ofirraa barataniitti eegudha!
← Agarii Tulluu from Serfdom to a Revered Oromo Hero
Cabbiin Jilballee Geettu Ammallee USA Kaaba-Bahaatti Baafattee Nama Kuma Hedduu Hujii Irraa Oolchite, Kuma 300 Irraa Ibsee Dhaamsite →
One comment on “Qarriffaa Saree Lafeerratti Akeekkatu!”
hilina zeleke on February 13, 2014 at 4:55 pm said: